सरकारले जे गरोस् अब निजी विद्यालय जेठ २२ गतेदेखि खुल्छन् : टीकाराम पुरी अध्यक्ष, प्याब्सन (भिडियोसहित) -
सरकारले ८ अर्ब बढाएर बजेट ल्याएपनि निजी विद्यालय सञ्चालकले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै ठाडै विरोध र अब सरकारी नियम नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै सरकारले निजी विद्यालयले सरकारीको गुणस्तर सुधार्न हेरिदिनुपर्ने गरी सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट नमान्ने जनाएका छन् ।
आखिर निजी विद्यालयका बजेटप्रतिका अपेक्षा के थिए ? अनि किन चरम असन्तुष्टि छायो ? यी र यस्तै विषयमा हामीले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीसँग बहस गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी । यो कुराकानी यहाँहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियोको लिंक अन्तिममा दिइएको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ८ अर्बले बजेट बढाएको छ । यहाँको के छ प्रतिक्रिया ?
बजेट समग्रमा अहिले कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी फैलिइरहेको सन्दर्भमा बजेट सकारात्मक रुपमा लिएको छु । बजेटले जनस्वास्थ्य र रोजगारी, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा महत्व दिएको हेर्दा बजे राम्रो लागेको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा बजेट ८ अर्बले बढेपनि प्रतिगामी ढंगको विभेदकारी र सामाजिक रुपमा विभेद गर्ने बजेट पाएका छौँ ।
सामाजिक विभेद भनेको के ?
बजेटले निजी विद्यालयमा पढ्ने नागरिकबारे सम्बोधन गर्न सकेन । विद्यालयमा खाजा खुवाउनेदेखि छात्राहरुका लागि स्यानिटरी वितरणमा पनि विभेद छ । निजीका छात्रा चिनेन । त्यसमा पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले निजी क्षेत्रलाई इतिहासमा पहिलोपटक उपेक्षा गरेको छ ।
२ लाख बढी शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन् । यति ठूलो रोजगारीको क्षेत्र दिएको छ । चैत्र महिनायता अन्य क्षेत्र जस्तै डामाडोल छ । आयस्रोत शुन्य छ । त्यो समयमा अन्य क्षेत्र सँगसँगै निजी शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त बनेको बेला यसलाई पनि राहत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारले केही देखेन । हामीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै हौँ । करिब साँढे ५ अर्ब त हामीले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई आम्दानी दिएका छौँ । विदेशिने ठूलो रकम निजी शिक्षाले जोगाएका छन भन्ने नदेखेर ठूलो विभेद गरियो ।
निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति सरकार अनुदार नै हो । तर यहाँको नेतृत्वमा राजनीतिक हिसाबले लाइन मिल्थ्यो नि अब रहेन होइन ?
इतिहासका कालखण्डमा इस्युगत कुरा हुन्छ । तर यसमामिलामा सरकारले नचिनेकै हो ।
तपाईँहरुले पटक पटक सरकारका उच्च अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो नि के आश्वासन पाउनुभएको थियो ?
हामीले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति संयोजक माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू, शिक्षामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि पत्रसम्म पठाएको हो । टेलिफोनमा पनि पटक पटक कुराकानी गरेका थियौँ । सम्बोधन कहीँबाट भएन ।
अब बजेटमार्फत निजीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर लगायत हेरिदिनुपर्ने भनेपछि सरकारले जुन २०७६ देखि ८५ सम्म सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशक भनेको थियो । त्यही दिशामा अघि बढेको हो ?
शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरता लगायतबारे यसअघि पनि कार्यक्रम आएकै हुन् । यो नयाँ कुरा होइन । फेलर प्रोग्राम फेरि ल्याएर जोड्नु आवश्यक छैन । माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूलाई नै जान्छ होला उहाँले के सोचेर ल्याउनुभयो । किन सामुदायिक विद्यालय सुध्रेन भन्ने सरकारले बुझेन । उसले के बुझ्यो भन्दा त्यहाँ स्रोत साधनको कमी छ । त्यो स्रोत साधनको कमीको पूर्ति निजीसँग सहकार्य गर्यो भने राम्रो होला भन्ने सोच्यो ।
सरकारीमा कहाँ स्रोत साधन कमी छ र ? बजेट नै त्यसरी हालिदिएको छ सरकारले । त्यत्रो स्रोत साधन दिएको छ ।
हो, ट्रेनिङ लगायतका कुराले धेरै माथि छन् सरकारी विद्यालय । सरकारले त्यति पनि बुझेन उहाँहरुलाई के गर्दा सामुदायिक माथि आउँछ थाहै छैन ।
यहाँ प्याब्सनको नेतृत्व, शिक्षान्त्री पनि सहयोगी हुनुहुन्छ होला । निजी मैत्री बन्नेगरी वातावरण बन्नुपर्ने होइन ?
यसो हुन्छ । नेृतृत्व को कसो भन्दा पनि यो मानिसको पेशागत संघ संगठन अलग होला । उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण प्राइभेट स्कुलप्रति कहिले पनि सकारात्मक होइन । आयोग बन्दा पनि निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व नगराई एकलौटी निर्णय गराएकै हो । उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि धेरै समस्या आएका हुन् । बजेट पनि त्यही कुराको निरन्तरता होला ।
यहाँहरुले उठाउनुभएको न्युन व्याजदरमा ऋण, घरभाडा, बत्ती लगायतका विषयबारे केही पनि सम्बोधन भएन । अब के गर्ने ?
हामी सौहार्दपूर्ण ढंगमा यो वातावरण मुल्याङकन गरेका हौँ । हामीसँग २ लाख बढी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी विद्यालयमा आश्रित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अन्यत्र स्रोत छैन र विद्यालयको पनि आयस्रोत बन्द भएकाले छैन । यस कारण अत्यन्त जटिल अवस्थामा छौँ भन्दै हामीले सहयोग मागेका हौँ । विभेद भयो सहूँला तर मुख्य कुरा अहिले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई जीवन पाल्न गाह्रो भएको छ ।
यो अवस्थामा केही न केही रुपमा शिक्षण संस्था अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी देशका विद्यालय पनि सञ्चालन भएको पाएका छौँ । त्यसैले हामी नेपाल सरकारलाई २० गते सम्म हेर्छौँ । २१ गतेदेखि सामाजिक दुरी कायम गरी भर्ना लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
त्यो भएन भने हामी २२ गतेदेखि प्याब्सन लगायतका विद्यालय कुन ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । भर्चुअल कक्षा, पोष्ट कोरोनामा विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे २१ गतेदेखि सरकारले विद्यालयका प्रशासनिक काम खोल्ने वातावरण बनाओस् भनेका छौँ । आशा छ सरकारले त्यो ढंगले काम गर्छ
यदि गरेन भने ?
यदि गरेन भने २२ गते वैठक बसेर फरक योजनाका साथ अघि बढ्छौँ ।
सरकारले कसरी अनुमति दिन्छ र ?
अहिले पनि यहाँहरुलाई थाहा छ डिपार्टमेन्टलर स्टोर, सुपर मार्केट खुलेका छन् । उद्योग चलाउन अनुमति प्राप्त भैसकेका अवस्थामा हामीले पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर विद्यालय चलाउन पाउनुपर्यो नि । त्यो कुरामा सरकारले अनुमति दिनुपर्यो नि ।
अर्को कुरा आगामी वर्षमा खाश गरेर निजीसँग समन्वय भन्ने कुरा हामी भोलि नै डेलिगेशनमा जान्छौँ । आधिकारिक निर्णय गर्छौँ बजेटमा आएको कुरा मान्दैनौँ भन्छौँ । कोरोनाले हामी आफैँ आक्रान्त बनेको अवस्थामा अरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
२१ गतेदेखि विद्यालय खुल्छ ? हिजो अभिभावकसहित विज्ञप्ति नै जारी भएको छ नि ?
रिजल्ट डिष्ट्रिव्युशन गर्न पनि सकेनौँ । विद्यालयमा को को विद्यार्थी कन्टिन्यु हुने भन्ने पनि केही भएन । क्यालेण्डर कस्तो हुने ? के के विधा राख्ने ? स्कुलको व्यवस्थापन, डेस्कबेञ्ज लगायतका व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि । हाम्रा शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा प्रवेश गरेर यो मिलाउनुपर्छ भनेका हाँै ।
यहाँहरुले पटक पटक विद्यालय खोलौँ भनेकै हो । कसरी हुन्छ र ? वातावरण कसरी छ ?
वातावरण किन नहुनु । नयाँ दिल्लीमा हेर्नुहोस् न हामीभन्दा कति आतंक छ । तर उसले यातायात, उद्योग धन्दा सुरु भयो । अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना गर्दैछ । त्यसकारण अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । सँधै कोरोनासँग भाग्ने ?
यसैगरी घरभित्र बसेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? म पनि एक नागरिक हो , मास्टर्स डिग्री गरेर एक बुद्धिजीवि क्षेत्रमा कार्यरत छु । अब कोरोनासँग अघि बढ्दै सामाजिक जीवन सुचारु गर्नुपर्छ । हस्पिटल बनाऊ । पिसिआर लगायत जे गर्नुछ गर । तर सामाजिक जीवनमा हामी फर्किनुपर्छ । मसँग नागरिकको हैसियतले यति भन्ने अधिकार राख्दिन र म ?
शिक्षामन्त्रीसँग समन्वय भैरहेको छ त ?
दिनको एक पटक टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ । हिजोदेखि भएको छैन ।
त्यसो भए त बजेटमा आउनुपथ्र्यो नि ?
उहाँ पनि ब्रमाण्डकै हो । उहाँ पनि शिक्षा क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ म पनि । उहाँ एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो बेग्लै कुरा हो म त नेपालभरबाट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो ।
प्याब्सनिष्टहरुले ताल्चा चाबी बुझाउने हो अब ? यहाँ नेतृत्व यहाँसँगै अपेक्षा छन् नि ?
साथीहरुले पनि के बुझ्नुपर्यो भने सरकार म होइन । म प्याब्सनको अध्यक्ष मात्र होइन । मैँले छाप लगाउने होइन । यसअघिको इतिहास पनि हेरौँ न । म अध्यक्ष भएपछि के के काम भए त्यो पनि हेरौँ न । बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ तर मागेको कुरा भएन भन्दैमा टाउको दुखाइराख्नुपर्ने छ र ? मैँले हिजो पनि भनेको थिएन होला म अध्यक्ष भएपछि बजेट ल्याएर तपाईँहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण म उपलब्ध गराउँछु भनेको थिएन । मैँले सकेको गरेकै हो । मैँले गर्ने कर्म हो । कर्म गरेकै पनि हो फल आएन । फेरि गरुँला ।
यहाँले फेसबुकमा पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो । पटक पटक मर्नुभन्दा एक पटक मर्न तयार होऔँ भन्नुभयो । यो के भनेको ?
सँधैभरी मागेर मात्र पाइन्न रहेछ अब खोशेर लिनुपर्छ । हामीले राम्रा कुरा उत्पादन गरेका छौँ । असत्य कुरा चोर्न ढाँट्न सिकाएका होइनौँ । माननीयहरु रक्सी अल्कोहल लगायत उत्पादन, गाँजाखेती गर्न पाऊँ भनेर खोजेका छन् तर हामीले शिक्षा क्षेत्रले राम्रो ढंगले अघि बढ्छौँ भन्दा सरकारले यस्तो व्यवहार गर्यो । पार्टीहरुको पनि दृष्टिकोण राम्रो छैन । हाम्रा राजनीतिक दलको, नेताको दृष्टिकोण बदल्ने कुरामा अब एक पटक संघर्ष गर्नुपर्छ यसका लागि हामी तयार होऔँ भनेर साथीहरुसँग मैँले राखेको अपेक्षा हो ।
नेतृत्वमा समस्या परेको हो ?
नेतृत्वमा मलाई समस्या परेको होइन । समग्र प्याब्सनलाई परेको भएर मैँले भनेको हो । दृष्टिकोण बदल्न पटक पटक कुरा गर्नुभन्दा सबै एकैपटक लागौँ । संघर्षमा होमिऔँ ।
तपाईँले फेसबुकमा अर्को स्ट्याटस पनि लेख्नुभएको छ आफूलाई शैक्षिक अभियन्ता भन्दै सरकारी ढुकुटीमा रजाईँ गर्ने शैक्षिक भाटहरुलाई बहिष्कार गरौँ भन्नुभएको छ । कसले गरेको छ यस्तो ?
आफूलाई अभियन्ता भन्ने सरकारसँग नजिक हुने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खाने बिचौलियाहरु छन् । तिनले निजी विद्यालयको विरोध गर्छन । त्यस्ताले सुधार भन्दा राज्यबाट कोष खाने काम गरेका व्यक्ति हुन् । तिनको अर्थ छैन । तिनलाई चिनौँ ।
बिचौलियाले आगामी दिनमा निजी विद्यालय थप संकट पार्लान् नि ?
बिचौलियाहरुले प्रशासक, मन्त्रालयस्तरमा नीतिगत तहमा पोल लगाउने, मन्त्रीलाई पनि प्रभाव पार्छन । त्यहाँबाट पैसा लिएर खान्छन अनि बाहिर ठूला ठूला आदर्शका कुरा गर्छन । परिश्रम गर्न सक्दैनन् किनकी बानी हुँदैन । अनि नचाहिँदा नचाहिँदा उत्पट्याङ कामहरु गर्छन । ती नेपालको शिक्षाका धमिरा हुन् ।
यो तीतो यथार्थ हो कि सरकारले बजेटमा केही हेरेन भनेर गरिएको टिप्पणी ?
यथार्थ कुरा के हो भने वैशाख २५ सम्म लकडाउन हुँदा मन्त्री ज्यूसँग मेरो सल्लाह भयो । मैँले के सल्लाह दिएँ भने २५ गतेदेखि हामी निजी, सामुदायिक सबै शैक्षिक क्षेत्र खुलाउन जानुपर्छ । त्यसरी जाऔँ भनेर राखेँ , एन प्याब्सन अध्यक्षसँग पनि कुरा भयो । मन्त्री ज्यूले ठीकै हो भन्नुभयो । भर्ना त सामुदायिक विद्यालयमा पञ्चेबाजा बजाएर ठूला ठूला व्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै हुन्छ ।
बरु हाम्रोमा त लुसुलुसु हुन्छ । त्यसकारण बाजा जे जे बजाउनुस् भनेका छौँ । त्यही गर्ने भन्दा बिचौलियका कानमा पुगेपछि निजीका एजेण्डामा शिक्षामन्त्री हिँड्यो भनेर निजीले शुल्क लिने प्रपञ्च रचे भन्ने गर्न थाले बिचौलियाले । अनलाईनमा शुल्क लिने भनेर बिचौलियाले निजीलाई भनेपछि अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्देशन दियो । मन्त्रीलाई निजी विद्यालय कसरी चल्छन थाहा छैन ।
हरियाणा सरकारको उदाहरण दिन्छु त्यहाँको सरकारले अप्रिल र मे महिनाको शुल्क तिर भनेर अभिभावकलाई सरकारले भनेको छ किनकी ती महिनाको घरभाडा तिर्नुपर्छ निजीले । शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएनन् भनेर भन्यो । हिमाञ्चल सरकारले मासिक शुल्क लिनु भन्यो ।
बाहिर के भन्छ होइन हाम्रोमा जाऊँ न । मन्त्रीले के भन्नुभयो त ?
हाम्रोमा त पैसै नलिइकन सित्तैमा पढाउ पैसै नलिउ, यहीबेला सक्किउ । यहीबेला गयौ भने सँधैका लागि हेडेक्क सक्कियौ भन्ने ढंगले सरकार आयो त्यो त देखिसक्यो नि । प्रमाणित नै भैसक्यो नि । यहीबेला निजी विद्यालयको समुल नष्ट भए उहाँहरुलाई निद्रा लाग्ने देखियो ।
निजी विद्यालय यत्तिकैमा सकिँदैन । जीवन नै यसैमा अर्पण गरेका छौँ । हामी आफ्नै ढंगले अगाडि बढाउँछौँ । हामी अब खोल्छौँ । अगाडि बढाउँछौँ । गैरकानुनी नचाहिने कुरा गर्नु भएन । सरकारका निर्णय मान्दैनौँ । अभिभावकले विश्वास गरेकाले बाँचेका छौँ ।
ताल्चासाँचो बुझाइदिने हो ?
किन बुझाउने ताच्चासाँचो हामीले । हामी ताल्चासाँचो खोलेर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ ।
राज्यलाई चुनौती भएन र ?
राज्यलाई चुनौती न चुनौती त उहाँहरुले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
अभिभावकको समर्थन होला ?
किन नहुनु । सामुदायिकमा अभिभावकको विश्वासै छैन ।
त्यसोभए कहिलेबाट खुल्छ स्कुल ?
यो महिनाको अन्तिमदेखि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । २१ गतेसम्म सरकारले मार्गप्रशस्त गरेन भने २२ गतेबाट हामी हाम्रा काम अगाडि बढाउँछौँ ।
शिक्षक कर्मचारी तयार भएर बसे भयो ?
सामुदायिक जेसुकै गरुन निजीको जति हामी सरोकारवालाहरु अभिभावक संघ, शिक्षक संघसंगठन, एन प्याब्सन, प्याब्सन बसेर निर्णय गर्छ अघि बढ्छौँ । सामाजिक दुरी कायम गरेर अघि बढ्छौँ ।
शुल्क फि के गर्ने ? शिक्षक कर्मचारीको तलब ?
शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउनुहुन्छ । फि हामी फिर्ता गर्दैनौँ । वैशाखदेखि अझ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्छौँ । सरकारको आदेश मानिरहनु पर्ने निर्णय मान्नुपर्ने भन्ने छैन ।
सरकारलाई चुनौती दिएर यस्ता कुरा आधिकारिक निर्णय गर्नुहुन्छ ?
हुन्छ हुन्छ । अब मिटिङ बसेर आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छौँ ।
सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दियो भने ?
आँट गरोस् न । शुल्क यति लि यति नलिइ भन्ने अधिकार के । सामुदायिक विद्यालयले बरु शुल्क लिएका छन् । अनि निजी क्षेत्रमा के को लागि यस्ता निर्णय ? सामुदायिकमा ब्रह्मलुट गर्न दिने अनि प्राइभेटमा यो गर नगर भन्ने नैतिक आधार छ ? ल चुनौती भयो हामीलाई लगेर जेलमा हाल ।
अब प्याब्सनले यो आह्वान गर्ने हो ?
आह्वान गर्छ । यो नगरे हाम्रा शिक्षक कर्मचारी भोकले मर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ ।
नेतृत्व फेलर भयो भने ?
सबै पास भएका छन् र ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि अविश्वास नगर्ने हुन्छ भने …..
अब पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ?
अहिले सबैलाई ढुवानी गर्न दिने पुस्तक पसल खोल्न दिने भनेको छ । अब व्यवस्थापन होला ।
विद्यालय सञ्चालकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भौतिक रुपमा पठन पाठन गराउन सकिन्न । विकल्प सोच्नुपर्छ । अनलाईनमा हेरौँ । सम्भव नभए टेलिभिजन, नभए रेडियो त्यो पनि नभए टोल टोलमा शिक्षक पठाएर हेर्नुपर्छ । अभिभावकले किताब लगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि कक्षा अगाडि बढ्छ ।
सबै समेटन नसकिए ?
सबैले समेटन सक्दैनन नि । भएन भने रेडियोबाट । एउटा विद्यालयले गर्ने होइन नि । पालिका प्याब्सनले गर्छ । एक स्कुल विशेषले गर्ने होइन । नहुनेलाई जे हुन्छ त्यसले गर्ने । कतिपयले भर्चुअल रुपमा गराएका छन् नि ।
२१ गतेपछि हामी आह्वान गर्छौँ । प्रशासन सञ्चालन, पाठ्यपुस्तक किन्ने कुरा सरकारले तयार गरोस् । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । भरसक सरकारकै निर्णय कुर्छौँ । सरकारले हामीले उठाएका कुरा समेटेन । सरकारले हामीलाई निर्देशन दिने अधिकार गुमाइसकेको छ । जतापायो त्यतै जे पायो त्यही बिचौलियका भरमा सरकार कुद्नु हुँदैन । सरकारले अब हात हाल्नु पर्दैन । हामी हाम्रो ढंगले चल्छौँ ।
जाँदाजाँदै केही भन्नुछ ?
मैँले सम्पूर्ण कुरा भनिसकेँ । म खुल्लापाटी लगायत यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले व्यक्त गर्नुभएको अन्तर्वार्ता भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।)
Tagged टीकाराम पुरी प्याब्सन
कोरोनाका कारण अर्का एकको मृत्यु
५३ जिल्लामा फैलियो कोरोना, आजै भेटिए हालसम्मकै बढी संक्रमित
१३ माघ २०७६, सोमबार १३:४५ April 16, 2020 khullapati
नेक्ससमा नवागन्तुक विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:५४
नेक्ससमा चुनाव, यसरी छानिए हाउस क्याप्टेन १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:५४
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहनेलाई अस्पाएर एजुकेशनको साथ १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:५४
मेन्टर इन्स्टिच्युटले अष्ट्रेलियन शैक्षिक मेला गर्ने १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:५४
जनकपुरमा ४६ कलेजका शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:५४